Mustaqbalka wuxuu ku jiri doonaa Microsoft | Martech Zone
Ma xusin Microsoft oo ku filan Martech Zone. Runtii maahan wax cudur daar ah maadaama shirkaddu ay raad weyn ku leedahay durba. Markaad lahadleyso COO-ga LiquidSpace, Doug Marinaro, iyo usbuucii la soo dhaafay oo la hadlaya Josh Waldo, Microsoft runtii waxay sameyneysaa dhaqdhaqaaqyo aan caadi aheyn oo aasaas u ah milkiilaha Ganacsi Yar. Maalgashigan hore ee nolosha shirkaduhu waa mid wax badan ka tari doona mustaqbalka Microsoft.
Josh Waldo wuxuu ahaa SMB (Ganacsi yar yar iyo mid dhexdhexaad ah) Maareeyaha Suuqgeynta Macaamiisha iyo Xalka (Hadda waa Agaasimaha Sare ee Suuqyada Cusub iyo Kanaalada Soo Baxaya ee Microsoft). Josh wuxuu ila wadaagay nambarro naxdin leh… Microsoft ayaa ku bixisay $ 9.5 Bilyan (oo leh B) cilmi baarista iyo horumarka hadda. Xitaa ka sii naxdin badan ayaa ah in 70 ilaa 90% miisaaniyaddaas ay udub dhexaad u tahay daruuraha! Cajiib.
Mid ka mid ah tusaale ahaan sida Microsoft ay ula shaqeyneyso SMBs waa BizSpark.
Si loo caawiyo bilowga tiknoolajiyada bilowga ah inay ku guuleystaan ​​barnaamijka Microsoft, BizSpark wuxuu awood u siiyaa helitaanka bulshada wada-hawlgalayaasha adduunka oo dhan - dhammaantood ku lug leh taageerida hal-abuurnimada shidaalka ee softiweerka iyo jiilka xiga ee ganacsatada tiknoolajiyadda.
Qaar ka mid ah shirkadaha shuraakada la ah waa kuwo aad u cajaa'ib leh:
Xero xisaabaadka, biilasha iyo softiweerka bangiyada
Dareenka - meel laga abuuro astaan ​​bilow oo lagu xiro 35,000 maal-gashadeyaal.
Mopapp - codsi lagula socdo iibka dhammaan suuqyada moobiilka.
Sharciga - ilaha sharciyeed ee shirkaduhu ku wareejiyeen.
oDesk - goob lagu xiro ilaha shaqaalaha fog ee wax kasta laga bilaabo horumarka ilaa adeegga macaamiisha.
Maaha in la xuso ururada ka caawinaya abuur, taakuleynta iyo bilaabida shirkadaha sidoo kale. Isla halkan Indianapolis waxaan ku aragnay guusha mid ka mid ah kuwan - Bilowga Toddobaadka.
Bizspark kaliya kuma xirna ganacsiyada lacagaha, wax soo saarka ama la-hawlgalayaasha, sidoo kale waxay ka shaqeyneysaa inay ka caawiso shirkadahaan tababarkooda iyo baahidooda suuqgeynta sidoo kale. Saxeex soo gal oo waxaad ka heli doontaa liis la yaab leh oo ah dhacdooyinka iyo ilaha saxda ah ee deegaankaaga si ay kaaga caawiyaan bilowga ganacsi guuleysta. Bizspark sidoo kale waxay isku xireysaa ardayda iyo ganacsiga. Ka fikir taas… laga bilaabo arday ilaa shirkad yar, Microsoft waxay siinaysaa ganacsiyada dhammaan gargaarka ay u baahan yihiin. Taasi waa istiraatiijiyad!
Mid ka mid ah meheradahaa ayaa ahaa LiquidSpace, codsi fantastik ah oo lagu dhisay Barxadda Windows Azure. LiquidSpace waa goob iyo codsi moobiil ah oo shaqaalaha moobiilku ka heli karaan meel ay ka shaqeeyaan, ha ahaato mid bilaash ah, oo la heli karo saacado yar, maalin ama ka badan. Codsiga moobiilku waa mid karti u leh goobta, sidaa darteed waxaad ku duuli kartaa magaalo oo waxaad ku soo bixi kartaa boos bannaan oo aan waqti lahayn.
Shirkadaha iyo milkiilayaasha hantida ganacsiga ee leh qol waxay ku dhajin karaan helitaankooda LiquidSpace. Waa lacag la'aan haddii boosku xor yahay. Haddii boosku ku kaco lacag, LiquidSpace waxay helaysaa boqolkiiba dakhliga. Markii ay la hadlayeen aasaasaha LiquidSpace iyo COO Doug Marinaro, waxay ku biireen BizSpark waxayna si dhakhso leh u qaateen barxadda Azure. Muddo 6 toddobaad gudahood ah maalgelinta, LiquidSpace waxay ahayd beta. Doug wuxuu sheegay in kharashku ahaa ka yar biilka taleefankiisa gacanta.
LiquidSpace hadda waxay leedahay in kabadan 200 goobood oo diiwaangashan, inta badan California. Shirkadda hadda waxay leedahay 20 shaqaale oo ka shaqeeya meel u dhexeysa Minneapolis iyo Minsk xarunteeduna waa Palo Alto. Doug wuxuu sheegay in waxa ugu fiican ee ku saabsan barxadda iyo la shaqaynta Microsoft ay ahayd inuu awood u yeeshay inuu diiradda saaro kobcinta ganacsiga halkii uu ka walwalin lahaa tikniyoolajiyadda. Wuxuu ku kalsoon yahay in miisaaniyadda barnaamijka 'Azure platform' ay si macquul ah ula kori doonto shirkadda sannado badan.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Microsoft Azure Platform:
Haddii si gaar ah laguu hayo, wax ka yar seddex sano jir, sameynta wax ka yar $ 1M US iyo soo saarista softiweer… waad awoodi kartaa hadda iska qor xubinnimadaada BizSpark.
Sidee Kiniinku u Beddelayaa Ganacsiga
Oktoobar 23, 2011 at 11:04 PM